musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UK Kuputsa Nhau » UK inodzora mitemo yekupinda yevakazara vachengeti vekunze
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau
UK inodzora mitemo yekupinda kune vachengeti vekunze
Iwo aripo marobhoti system achatsiviwa nerunyorwa rutsvuku rwe nyika nenzvimbo izvo zvicharamba zvichikosha kuitira kuchengetedza hutano hweveruzhinji, uye nzira dzakareruka dzekufamba kwevanosvika kubva pasirese kubva Muvhuro 4 Gumiguru na4am.
UK ichadzikisa kuyedzwa kunodiwa kune vanokodzera vachengeti vekunze vafambi pavanosvika.
Vanokodzera zvizere vakabaiwa vachati vanozokwanisa kutsiva yavo yezuva 2 bvunzo neinodhura lateral kuyerera bvunzo.
Chero ani anoyedza aine hutachiona achazoda kuzviparadzanisa nekukurumidza uye kutora bvunzo yePCR inosimbisa.
UK Transport Secretary Grant Shapps vazivisa nhasi kuti kutanga musi waGumiguru 4, 2021, hurumende yeUK iri kurerutsa zvikuru mitemo yekupinda nezvinodiwa kune vashanyi vanobva kune dzimwe nyika.
UK Wekufambisa Secretary Grant Shapps
Nyowani yakareruka sisitimu yekufamba kwenyika mukuona kwekubudirira kweUK yekumba yekudzivirira kuburitsa, ichapa hukuru hwakasimba kune indasitiri nevatakurwi.
Zvinodiwa zvekuyedzwa zvichadzikiswawo kune vanokodzera vakabaiwa jekiseni, vasingazoda kutora PDT pavanenge vachienda kuEngland kubva Muvhuro 4 Gumiguru 4am.
Kubva pakupera kwaGumiguru, vanokwenenzerwa vakabaiwa vachena zvizere uye avo vane jekiseni rinotenderwa kubva kuboka rakasarudzwa renyika dzisiri dzvuku vanozokwanisa kutsiva zuva ravo rechipiri bvunzo neyakareruka yekuyera kuyerera bvunzo, ichideredza mutengo weyedzo pakusvika England. Hurumende inoda kuunza izvi pakupera kwaGumiguru, ichivavarira kuti ive panzvimbo yekuti vanhu vadzoke kubva kuhafu yetemu.
Chero ani anoyedza aine hutachiona achazoda kuzviparadzanisa nekutora bvunzo yePCR, pasina muripo wekuwedzera kune mufambi, inozoteedzana nenzira yekubatsira kuona misiyano mitsva.
Kuedzwa kwevasina kucheneswa vatakuri kubva kune dzisiri dzvuku nyika kunosanganisira pre-kuenda bvunzo, zuva 2 uye zuva 8 PCR bvunzo. Kwayedza kusunungura inoramba iri sarudzo yekudzora yekuzviparadzanisa nguva.
Vapfuuri vasingazivikanwe sevari kubayiwa zvakakwana majekiseni nemishonga inobvumidzwa uye zvitupa pasi EnglandMitemo yekushanya kune dzimwe nyika, ichazofanirwa kutora pre-kuenda bvunzo, zuva 2 uye zuva 8 PCR bvunzo uye kuzviparadzanisa kwemazuva gumi pavanodzoka kubva kune isiri-tsvuku runyorwa nyika pasi peiyo nyowani-mativi maviri ekufamba chirongwa . Kwayedza yeKusunungura icharamba iri sarudzo kune vasina kuvharirwa vafambi vanoshuvira kupfupisa nguva yavo yekuzvitsaura.
“Tiri kuita kuti kuyedza kuve nyore mukufamba. Kubva musi waMu 4 Gumiguru, kana iwe wakazara vax [wakabaiwa majekiseni] haudi kuedza pre-kuenda bvunzo usati wasvika kuEngland kubva kune isiri-tsvuku nyika uye kubva gare gare muna Gumiguru, uchakwanisa kutsiva zuva 2 PCR bvunzo nekufamba kwakachipa kwakachipa, ”Secretary Grant Shapps tweet
Sajid Javid, Hutano uye Munyori Wezvekuchengetedza Zvevanhu, akati: “Nhasi tarerutsa mitemo yekufambisa kuti ive nyore kunzwisisa nekutevera, kuvhura kushanya nekuderedza mitengo yekuenda kunze kwenyika.
"Sezvo kurwisa kwepasi rose kwekubaya nhomba kuri kuramba kuchikura uye vanhu vazhinji vachichengetedzwa kubva kuchirwere chinotyisa ichi, zvakanaka kuti mitemo nemirau yedu zvifambe."
American Airlines Inozivisa Yekutanga Yakananga Miami ku ...
Mr. Daniel Pimental anoti:
Svondo 26, 2021 pa 07: 04
Iripo parizvino mwenje wetraffic unozotsiviwa nerunyorwa rutsvuku rwe nyika nenzvimbo izvo zvicharamba zvichikosha kuitira kuchengetedza hutano hweveruzhinji, uye nzira dzakareruka dzekufamba kwevanosvika kubva kune dzimwe nyika. Inobatsira kwazvo kwatiri.